Airbus ACJ320neo Aerospace Private Jet Diyaaradaha Review waxaa qaadidda raaxada ay sarrayntiisu cusub iyo rakaabka duulaya in jahooyinka cusub, by faa'iidaysanaya technology ugu casri ah, kuwaas dayuuradaha shirkadaha waasac bixiyaan macaamiishu awood u leh inay qaataan hab nololeedka ay raaxo leh oo iyaga la jira meel kasta oo ay tagaan halka safarka ee Riding on jet gaar ah waxaa loo arkaa by qaar ka mid noqon raaxo kama dambaysta ah ee safarka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qiimaha dhabta ah ee saaran mid ka mid ah, waa in aad si dhab ah u awoodi. Inkasta oo ay jiraan dhammaan noocyada kala duwan ee diyaaradaha loo isticmaalo maraakiibta diyaaradiisa khaaska ah, Airbus waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican diyaarad ganacsi.
Airbus, shirkadda in ay magaceeda u sameeyey tabo cusub ee technology aerospace, waxaa bixiyey ay jiilka ugu dambeeyay ee diyaaradaha si gaar ah loogu talagalay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo isticmaalka jet. Ka mid ah jiilka cusub ee diyaaradaha waa ACJ320neo Airbus ah. dib u eegis Tani waxay qaadan doontaa aragti dhaw at this model cusub iyo sida ay u ka dhigan mustaqbalka Diyaaradaha gaarka ah.
Airbus ayaa ka shaqeeya ay jiilka xiga ee dayuuradaha tan 2016. Ka mid ah updates waa ay aadka loo jecel yahay Jet Airbus Commercial (ACJ) line. line ay ACJ waa mid aad loo jecel yahay wuxuu la jiraa kuwa iibsato dayuuradaha iyaga u gaar ah iyo la maraakiibta in lagu qaado adeegyada kirada diyaaradiisa khaaska ah. Iyadoo ACJ ayaa la xaqiijiyay in ay aad u guul ay isku darka ah muuqaalada, waxqabadka, iyo hufnaan, Airbus weli ogyahay in weli ay jirto boos uu horumar. Tani waxay keentay in la sii daayo ACJneo ah, Oo qarniga soo socda ee Airbus diyaaradaha ganacsiga, in January 2016.
Airbus ACJ320neo waa wax soo saarka ee barnaamijka neo Airbus ee. Neo run ahaantii waa gaabinta ah in u taagan tahay "option engine cusub". Airbus horumariyo fursadaha engine cusub ee diyaaradaha ay ganacsi sida A320 ah. Kuwani matoorada cusub gool waxqabadka ay dureri dhexdeeda: a 15 in 20 boqolkiiba horumar in hufnaan shidaalka, buuqa hoos, iyo qiiqa hoose. Iyada oo ballamadan, amarada ah "diyaarado neo" waxay ahaayeen unugyo weyn-5200, si sax noqon. Si taas loo rido muuqaal, Airbus ayaa hareeraha iibin 7500 diyaarad cidhiidhi-jirka tan 1988. Marka la eego baaxadda iibka, neo wuxuu matalaa mustaqbalka ee Airbus. Waxay leedahay in ay ku nool yihiin ilaa Crore ah sida waxa haatan kii lacag aasaasiga ah ee shirkadda.
In horumarka ACJneo ah, Airbus sugayay siyaabood oo wax diyaarado ay ka fiican oo ka badan sidii hore. Shirkadda hoose ton loo isticmaalo waa qarashka "per rakaabka mayl kursiga". Waxaa loo arkaa sida koombo oo ka mid ah kharashka-oolnimada ee ka hawlgala diyaarada. The hoose kharashka tani waa, sida hufan diyaaradda waa. Si aad u hesho per rakaabka qiimaha ugu hooseeya mile kursiga, Airbus sameeyey oo dhan cayn kasta oo horumar injineerinka ee ACJneo ah. Iyadoo Airbus ayaa xooga saaraysaa tayada shaqo, Sidaasay yeeleen oo aan ku allabaryaya raaxada, waxqabadka, iyo sifooyinka kale ee la jecel yahay, waayo, Diyaaradaha. ka dib goobahaasi horumar la gelin doonaa focus.
Marka la eego in ay meel muhiim ah in line soo saarka Airbus, ACJ320neo leeyahay in ay ku noolaadaan ilaa Crore ah oo dheeraad ah. Waxa ugu wanaagsan waa in inta aad qaadanaysid aragti dhaw, Diyaarad ay tani tahay wax walba waxaa lagu xayeysiiyaa ... ka dibna more qaar ka mid ah.
awoodda guud ee diyaarad loo qaybin karaa tubta badan. cabiraada Tani waa asal ahaan ku tiirsan qaabeynta gudaha ee diyaarad gaar ah. awoodda Alaabtoodii loo qaybin karaa 2 xuduudaheedu: awoodda Alaabtoodii gudaha, taasoo ah tiro la mid ah Alaabtoodii in la qariyaa kartaa gudaha cadaadis / heerkulka gacanta qol ee diyaaradda, iyo awoodda dibadda Alaabtoodii, taasoo ah tiro la mid ah Alaabtoodii in laga heli karaa ka baxsan diyaaradda.
Inkastoo ACJ320neo Airbus ah ma laha awood Alaabtoodii dibadda, kor waxa ay taasi waayo waxa ay ka awood weyn Alaabtoodii gudaha. Awoodda Alaabtoodii gudaha ee ACJ320neo ah ayaa lagu qiyaasay dhacdhaco a 976 litir cubic, taas oo ka dhigaysa si fudud ugu fiican ee ay fasalka ku jirta qeybta this. Awoodda fadhiga guud ee diyaarad this oo gebi ahaanba ku tiirsan nooca gaadmada ah gudaha milkiilaha doonayo, laakiin qaabeynta stock ay ku siin karaan fadhiga raaxo 19 dadka, taas oo ah in ka badan ku filan ujeedooyin badan.
Si loo qiyaaso payload diyaarad ee, aad leedahay si ay u isticmaalaan cabbirka kala duwan oo la xidhiidha miisaanka diyaarada ee, tirada alaabta u qaadi karaan, iyo wixii la mid ah. Miisaanka uu leeyahay hawl of diyaarad waa miisaanka diyaaradda oo ay ku jiraan shaqaale ka howl-, dheecaannada loo baahan yahay sida shidaalka, iyo qalabka operator oo dhan looga baahan yahay duulimaadka. duushay ugu badnaan iyo miisaanka degtey waxaa lagu qeexaa sida miisaanka ugu badan guud ee diyaaradaha si buuxda u buuxiyey oo meesha duushay oo soo degtey si ammaan ah samayn karaa. miisaanka waxtar leh waxaa lagu qeexaa sida lacagta ah oo miisaankeedu yahay in diyaarada qaadi karaan ka dib miisaanka duuliyaha, shaqaale, iyo shidaalka laga saaro.
In la eego sifooyinka payload kuwan, uqaadineed ku ACJ320neo Airbus ayaa sidoo kale ka shaqeyn aad u wanaagsan ay raalli. miisaanka caga badnaan lagu qiyaasay 148,592 pounds, iyo miisaanka duushay ugu badnaan lagu qiyaasay 174,165 pounds, taas oo uu ka badan yahay ee diyaaradaha ugu ee ay fasalka. Miisaanka uu leeyahay hawl diyaarad this ayaa lagu qiyaasay 104,453 pounds. Ugu dambayn, payload ah oo waxtar leh ee diyaarad this ayaa lagu qiyaasay 8,900 pounds, taas oo laga yaabaa in aan ka dhawaajiyaan badan, laakiin waa weyn u ka badan yahay tartanka. Marka la eego tirada payload, ACJ320neo wuxuu u iftiimaa.
Speed ​​waxa ay ku xidhan tiro balaadhan oo ah doorsoomayaasha. Qiimaha Tani waxay ku xidhan tahay sifooyinka gudaha sida xoogga engine iyo hufnaan aerodynamic, halka arrimo ka baxsan sida dhumucdiisuna waxay hawada iyo dabayshu sidato / tailwind xoog sidoo kale door. Waayo, ACJ320neo Airbus ah, tirooyinka farta diyaarad in ka badan yahay oo awood u duulimaadka degdeg ah. Its xawaaraha safar ugu badnaan lagu qiyaasay 527 mph, ay celcelis ahaan xawaaraha safar ayaa lagu qiyaasay 527 mph, iyo xawaaraha safar kala duwan oo muddo dheer ayaa lagu qiyaasay 514 mph. tirooyinka intaas oo dhammu waxay ka dhigan yihiin hagaajinta suubban marka la barbar dhigo diyaarado la mid ah ee ay fasalka.
kala duwan ee diyaarad waa cabbirka sida ay fog diyaarad safri karaa iyadoo la isticmaalayo taangiga ay ka buuxaan shidaal. Marka la eego in hal arrin in Airbus diiradda saaray inta lagu guda jiro horumarinta barnaamijka Neo waa hufnaan shidaalka, waxaad filan kartaa diyaarad this u iftiimiyo in waaxda ama ugu yaraan ay u muujiyaan horumar weyn marka loo eego in ay tartanka. Waxaa cad in inta lagu jiro baaritaanka, isbedel oo dhan shaqeeyay, taasoo keentay galay tirooyin kala duwan oo si fudud afuufi doonaa tartanka iska.
The kala duwan ugu badnaan qiyaasay of ACJ320neo Airbus ah ayaa lagu qiyaasay 7,099 miles, halka kuraasta kala duwan ee ka buuxa ayaa lagu qiyaasay 7,021 miles. kala duwan oo ugu badnaan waxaa lagu qeexaa sida jahooyinka diyaarad duuli karaan xawaare safar at sare fiicnayn, halka kuraasta kala duwan oo buuxa waxaa lagu qeexaa sida kala duwan ee ugu badan diyaarad duuli kartaa ugu badnaan payload. The cabbir kala dheefay si weyn uga sarreeyaa marka la barbardhigo Diyaaradaha oo la mid ah, bixinta on yabooha in Diyaaradaha neo ugu yaraan kasoo muuqan doona 20% hufnaan shidaalka ka wanaagsan marka loo eego in ay tartanka.
Sare waa ton qaab kale oo caadi ahaan loo isticmaalo si loo ogaado waxqabadka awoodaha diyaarad ee. sare sare ee diyaarad safri kartaa, si fiican awoodeeda waa. Isla mar ahaantaana, ay awoodaan in ay u safraan at sare sare soo bandhigayaa qaar ka mid ah waxqabadka iyo hufnaanta faa'iidooyinka. Iyadoo la joogo hawada khafiif ah ee heerar sare, iska caabin ah hawada iyo jiididda noqdo dhimay, taasoo keentay in xawaare sare safarka iyo hufnaan shidaalka wanaagsan. farsamada yaabka leh laygu, ACJ320neo leeyahay saqafka adeegga of a 41,000 feet, oo waa laygu hoose marka loo eego dayuuradaha la mid ah in ay leeyihiin heerar adeeg ee ilaa 45,000 feet.
dhererka runway waa set oo ah cabirka in loo ogaado masaafada u baahan yahay diyaarad in uu iska saaro xawaare buuxda oo lagu sameeyo joogsiga buuxda on degtey. Masaafada u soo degtey ee ACJ320neo ah ayaa lagu qiyaasay 4,665 feet, taas oo macnaheedu yahay in ay tahay dhererka loo baahan yahay ee beerta loo baahan yahay in dalka diyaaradaha ee miisaanka celcelis. The dhererka isku dheeli tiran berrinka ayaa lagu qiyaasay 5,820 feet, taas oo ah masaafo loo baahan yahay in ay u diraan diyaarad at xawaaraha duushay ka dibna lagu sameeyo joogsiga a full. Inkasta oo ay jiraan arrimo badan oo saameyn ku yeelan kartaa tirooyinka dhererka runway kuwan, waxaa si ammaan odhan karaa in ACJ320neo ay u baahan tahay dhererka runway dheeraad ah in uu iska saaro oo dalka si nabad ah.
Airbus ACJ320neo waxay leedahay boatload ka mid ah qaababka cusub, faa'idaysanaya wanaajinta casriga horumariyo ka badan sano oo khibrad ah diyaaradaha. ACJ320neo The, iyo sidoo kale ku dayashada kale jet ganacsiga ku jira barnaamijka neo, yimaado caadiga ah la Daqsi by gacanta ku silig, hage sare, iyo qaababka kala duwan-hagaajinaysa. Waxa kale oo la Timaadda qol 90-foot ah oo laga beddeli karaa sida ay baahida mulkiilaha iyo rabitaankayga. Iyadoo default qaabeynta 19-fadhigii waa labada comfy iyo raaxo, Airbus ayaa toban kun ah fursadaha kuwaas oo caawin doona astaysto Diyaaradaha sida uu sheegay mulkiilaha shakhsi door bidayso.
The Aviation Airbus ACJ320neo, halka fog ka jet kaamil ah, matalaa mustaqbalka diyaarad ganacsi. Iyada oo horumar la taaban karo ay iyo design laayeen goynta, waxaa ka samatabbixiyaa tirooyinka waxqabadka iyo hufnaanta dhigaya Istaaga ka hartay. Waxaa si degdeg ah waa, shidaalka ku ool ah, iyo in ka badan oo awood u waday xamuulka culus yahay saffarro ay. Horumarkan waxaa gebi ahaanba dareen dhigi ma ahan oo keliya in milkiilayaasha diyaaradiisa khaaska ah, laakiin waliba kuwii xiiso kirada. raaxada isla, waxqabadka wanaagsan, iyo kharashka hoose: maxaa dheeraad ah kiraystaha rabto kartaa on a kirada diyaaradiisa khaaska ah? Airbus mar kale ayaa u sameeyeen.
Airbus luuq acj320neo gudaha